နောက်ဆုံးသောကာလအသင်းတော်၏မာန်နတ်အပေါင်းအပါအသင်းသူသင်းသားများ | Evil Church Members in the Last Days | Real Conversion
“ဆိုးညစ်သောသူ၊ လှည့်ဖြားသောသူတို့မူကား၊ သူတပါးကို၎င်း၊ကိုယ်ကို ၎င်းလှည့်ဖြား၍ ဆိုးညစ်ခြင်း၌ တရွေ့ရွေ့တိုးပွါးကြလိမ့်မည f(၂တိ၃း၁၃)
ဒေါက်တာ ဟီရုဒ်လင်ဆေးလ်သည်၊ ၁၉၆၈-၁၉၇၈ခုနှစ်ထုတ်ဝေသော “ယနေ့ ခရစ်ယာဉ်”ဟူသော မဂ္ဂဇင်း၏အယ်ဒီတာတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ သူသည်လမ်းမီးပြတိုက် စာအုပ်ဖြစ်သော သမ္မကျမ်းစာအတွက်စစ်ပွဲဟူသော စာအုပ်၏ စာရေးဆရာလည်းဖြစ် ပြီး သမ္မာကျမ်းစာကို လေ့လာခြင်းဟူသော စာအုပ်နှစ်၏ အယ်ဒီတာလည်းဖြစ်ပါသည်။ သူသည်ဖူလ်လာ့ တီဩလောဂျီစီမန်နာရီကို တည်ထောင်သူလည်းဖြစ်သည်။ ထိုကျောင်း သည် Liberalism မှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်၏။ သူသည်၁၉၈၂၊ခုနှစ်၊ ကျွန်ုပ်၏လက် ထပ်ပွဲ၌ တရားဒေသနာ ဝေငှာပေးသော ကျွန်ုပ်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ခင်မင်သူလည်းဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာလင်ဆေးလ်သည် The Gathering Storm: World Events and the Return of Christ ဟူသော စာအုပ်တို့ကို ရေးသားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါသည်။ (Tyndale House Publishers, 1980). ထိုစာအုပ်၌ရေးသားဖေါ်ပြထားသည်မှာ၊
ယေရှုပြန်လည်၍ ကြွတော့မည်ဟု ကြွေးကြော်စဉ်ပင်၊ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အသင်းတော်တို့သည် လောကီဆန်လျှက်ရှိနေကြသည်။ ခရစ်ယာန်တို့၏ စိတ်ဓါတ်ဆိတ်သုန်းနေပြီဖြစ်သည်။ ယနေ့ခရစ်ယာန်တို့သည်၊ ခရစ်ယာန် စိတ်ကူးစိတ်သန့်များမရှိကြတော့ပေ၊ လောကီပညာရေးတို့ကြောင့်ဦးနှောက် ကျင်းကြရပြီဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့အစည်းအဝေးကြီးတို့၌ တင်ပြသောအစည်း အဝေးအစီစဉ်တို့ကို ကြည့်သော်၊ ကမ္ဘာကြီး၏အသက်ရှင်မှုသည် သမ္မာ ကျမ်းစာကို အခြေမခံကြတော့ပြီ၊ (ibid., p. 70).
အမေရိကန်နိုင်ငံသည်၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မျိုးဆက်ကိုသာ မွေးထုတ် တော့၏၊အခြေအနေတရပ်မှ နောက်ဆုတ်နေပြီ၊ သနားခြင်းဂရုဏာတော် ခေါင်းပါးရချေပြီ၊ မှားယွင်းသောဘာသာတရားကိုသာ လက်ကိုင်နေကြပြီ၊ မျိုးကန်းပုဂ္ဂိုလ်စနစ်ကို ကျင့်နေကြပြီ။ လူငယ်များမိမိတို့၏ ရိုးရာယဉ် ကျေးမှုကို မလိုက်နာလို ကြတော့ပြီဖြစ်သည်။ လူကြီးစိတ်ဆိတ်သုန်း နေကြပြီ၊ လူသားတို့၏ အကျင့်စရိုက်ပျောက်ကွယ်နေပြီ၊ ကမ္ဘာလူမှု ကျင့်ဝတ်လည်း ပျောက်ကွယ်နေပြီ၊ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းသည် ဝက်ကဲ့သို့၎င်း၊ မြင်းကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြသည်။ (ibid., pp. 66-67).
၂တိမောသေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စကားလုံး၃လုံးဖြင့် အစပြုပါသည်။ “နောင်ကာလ တွင်ခဲယဉ်းသောကာလဖြစ်မည်ဟု သိမှတ်ကြလော့”(၂တိ၃း၁)။ ဒေါက်တာဂျေဗန်နန် မက္ကီးက၊ ရှင်ပေါလု၏၂တိမောသေ၃နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “နောင်ကာလ အသင်းတော်နှင့်ပါတ်သက်ပြီး ထွန်းလင်းတောက်ပသော အနာဂတ်အသင်းတော်ဖြစ်မည် မဟုတ်”ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ “နောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလသည် စက်မှုသိပ္ပံထွန်း ကားသောခေတ်ဖြစ်၍ ၎င်းတို့တက်ပြောင်းလဲမှုကို ထောက်ရှုသော်၊ ယ္ခုသည်နောက်ဆုံး သောကာလဖြစ်နေပေပြီ” (J. Vernon MeGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers 1983, volume V. p. 469; note on II Timothy 3:1). ဒေါက်တာ မက္ကီးကဆက်လက်၍ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
“ခဲယဉ်းသောကာလ”ဟူသည်မှာ၊ ဝမ်းနည်းကြွေကွဲဖွယ်သော ခေတ်ကာ လ၊မျှော်လင့်ချက်မဲ့သောခေတ်ကာလသည် ရောက်လာလိမ့်မည်။ ထိုအရာ များကို ထောက်သော် အသက်တာအသစ်တဖန် ပြောင်းလဲနေသောကမ္ဘာ ကြီးနှင့်မတူတော့ပေ၊ ဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါလား? သမ္မာကျမ်းစာတော် မြတ်က ထိုသို့ဖြစ်ရန်သွန်သင်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ လူတို့သည်မဖြစ်နိုင်သော ဦးနှောက်အကြံအစည် များတို့ဖြင့် အသက်ရှင်ကြသဖြင့် သဲပေါ်ကငှက် ကုလားအုပ်နှယ် အရာမထင်ဖြစ်နေသည်။ ထို့သို့နေထိုင်ကြမည့်အစား မည်ကဲ့သို့ နောက်ဆုံးသောကာလ၌ ဖြစ်ပျက်လာမည်ကို မှတ်သားလျှက် အသက်ရှင် စေလိုသည်။ ၂တိမောသေ အခန်းကြီး၃နှင့်ပါတ်သက်ပြီး ထူးခြားသော အချက်ကိုးချက်ကိုလည်း သိစေလိုပါသည်။ ၎င်းသည် အကျဉ်းတန်အရိုးဆိုးသောတစ်မြုံ၊ တစ်မိပေါက်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ သို့သော် သမ္မာကျမ်းစာတော်၌ ထိုကဲ့သို့ဖြစ်မည်ဟု ကျမ်းစာရှိသောကြောင့် ကြည့်၍လှပပါသည်။ ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ဆုံးသော အသင်းတော်ကာလသို့ ရောက်ရှိနေပြီဟု ယုံကြည် ပါသည်။ သင်သည် ထိုသို့ ခဲယဉ်းသောခေတ် ကာလထဲ ကျွန်ုပ်တို့ ရောက်ရှိနေပြီဟူ၍ တွေးထင်ဖူးမည်ဟု မထင်ပေ။ ယခုသည် “ခဲယဉ်းသောကာလ”ထဲ ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေပြီဟု ကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ဘယ်အတိုင်းအတာထိ ထိုကာလရှည်ကြာမည်ကိုမသိပါ သို့သော်ထို ခေတ်သည် ကောင်းလာမည်မဟုတ် ပို၍ဆိုးသွန်းလာမည်ဖြစ်သည်၊ (ibid., pp. 469-470).
ကျေးဇူးပြု၍ အခန်းငယ်၁မှ၄ကို ဖတ်ကြားကြပါစို့
“နောင်ကာလသည် ခဲယဉ်းသောခေတ်ကာလဖြစ်မည်ဟု သိမှတ်လော့။ အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား၊ လူတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်ချစ်သောသူ၊ ငွေကို တပ်မက်သောသူဝါကြွားသောသူ၊ ထောင်လွှားစော်ကားသောသူ၊သူ့အသ ရေကိုရှုတ်ချသောသူ၊ မိဘစကားကို နားမထောင်သောသူ၊ ကျေးဇူးမရှိ သောသူ၊ သန့်ရှင်းခြင်းမရှိသောသူ၊ ပကတိကြင်နာစုံမက်ဖြစ်ခြင်း၊ ကင်းသောသူ၊ ရန်ငြိုးဖွဲ့သောသူ၊ ချောစားတတ်သောသူ ကိုယ်ဣန္ဒြေကို မချူပ်တည်းနိုင်သောသူ၊ ပြင်းထန်သောသူ၊ သူတော်ကောင်းကိုမုန်း သောသူ၊ သစ္စာကိုဖျက်တတ်သောသူ၊ သတိပေးခြင်းကိုမခံသောသူ၊ မာန်မာနနှင့်ယစ်မူးသောသူ၊ ဘုရားသခင်ကိုနှစ်သက်သည်ထက်ကာ မဂုဏ်ခံစားခြင်းကို သာ၍နှစ်သက်သောသူ၊ ဘုရားဝတ်၌မွေ့လျော် ယောင်ဆောင်၍” (၂တိ၃း၁-၄)။
သင်တို့ကိုထိုင်နိုင်ကြပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်၌ အဘယ်ကြောင့် ထိုကဲ့သို့အသက်ရှင် နေသူရှိကြရသနည်း? အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စစ်မှန်သောယုံကြည်သူအမှန်ပဲလား၊ အစစ်လား၊ အတုလားဟူ၍ မေးမြန်းခြင်းမရှိဘဲ သင်းအုပ်ဆရာကနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာကို ပေး လိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဝိညာဉ်ပျောက်ဆုံးသူ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းတော် ၌ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည်မယုံကြည်သောသူများဖြစ်ကြသည်။ အပေါ်ယံဆန်မျှ သာ ခရစ်ယာဉ်ဖြစ်ဖို့ “ဆုံးဖြတ်ခြင်း” ဖြစ်ပါသည်။
၂တိ၃း၁-၄တို့ထဲက စကားစု၁၉လုံးကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့သိကြသည်အတိုင်း “နောက် ဆုံးသောကာလ”၌ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်၌လည်း ထိုသို့သောသူများရှိနေပါသည်။
၁။ “လူတို့သည် ကိုယ်ကိုကိုချစ်သောသူ” ပျောက်ဆုံးသောလူသားဟူ၍ ကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်ခြင်းသည်၊ ခရစ်တော်ထက်မိမိကိုကိုချစ်သောကြောင့်ဖြစ် သည်။ မိမိကိုကိုချစ်သောသူဟု သိနိုင်ခြင်းသည်လည်း တနင်္ဂနွေညနေ ပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌မလာရောက်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်ကိုကိုယ် ချစ်သောသူဟုဆိုရာတွင် သင်တို့သည်အိမ်အလည်သွား ဆုတောင်းပေး ခြင်း၊ ဧဝံဂေလိ ဟောခြင်း၊ မရှိတော့ခြင်းဖြစ်သည် ဤသို့ဖြင့် အသင်းတော်၏ တိုးတက်ရေးကို မယုံကြည်သော သူတို့အားဖြင့် ရပ်တန့်စေခြင်းဖြစ်သည်။
၂။ “ငွေကိုတပ်မက်သောသူ”ဆိုလိုခြင်းသည်“ ငွေကိုချစ်သောသူများ”ဟုဆို လိုပါသည်။ ဇာတိလူသားတို့သည် ခရစ်တော်ထက်ငွေကြေးမြောက်များ စွာကို လိုချင်ကြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၌ မိန့်တော်မူသည်ကား “ငွေကို တပ်မက်ခြင်းသည်မကောင်းသောအမှုအပေါင်းတို့တွင် မူလအမြစ်ဖြစ် သတည်း “(၁တိ၆း၁၀)။ လူငယ်မောင်မယ်များတို့သည် အသင်းတော်၌ ကြာရှည်စွာရောက်ရှိလာကြခြင်းသည် သူ့မိဘတို့မှ ညနေခင်းတွင် ငွေကို ပေးတတ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ မကြာမှီလုပ်ငန်းအဆင်ပြေသောအခါ လိုရာကိုထွက်သွားကြပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် “ငွေကိုတပ်မက် သောသူ” ဖြစ်သောကြာင့် ဖြစ်ပါသည်။
၃။ “ထောင်လွှားစော်ကားသောသူ”ကို ဂရိဘာသာစကားအားဖြင့် ဤကျမ်း နှင့်ရောမ၁း၃၀၌သာ ဤအကြောင်းကိုတွေ့ရသည်။ သုံးနှုန်းထားသော အဓိပ္ပါယ်သည် ဘုရားမဲ့လူသားဟူ၍ သုံးနှုန်းထားပါသည်။ ထိုသူတို့၏ “သက်သေခံချက်”ကို ကျွန်ုပ်တို့ကြးရသည်မှာ၊ ထိုသူတို့သည် မိမိတို့ကို အမွမ်းတင် “ဝါကြွားလျှက်” မိမိကိုကို ကောင်း၏၊ ဆိုး၏ဟူသော ဝါကြွားမှုအပေါ်၌ ခရစ်တော်၏မိန့်တော်မူချက်ကို ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ထိုသူတို့သည် မိမိကိုကို အသစ်ပြုပြင်နိုင်သည်ဟူ၍ ဆိုစေကာမူ! ထိုသူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ကို ချီးမွမ်းခြင်းမရှိပါက ထိုသူတို့သည် အသက်တာ မပြောင်းလဲကြ၍ ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် မိမိတို့၏ အပြစ်ဆိုးကျိုးများကို ပြောဆိုကြပြီးနောက် “ငါသည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီ” ဟူ၍ပြောဆိုကြပါသည်။ ဝါကြွားခြင်းသက်သက် အတွက်ဆိုလျှင်၊ ယေရှုသည် ထိုသူတို့အထဲ၌ ကိန်းဝပ်ပါမည်လား?
၄။ “ဝါကြွားသောသူ” မာန်မာန မြင့်တက်လျှက်ရှိပြီး၊ dတ်နှလုံးနှိမ့်ချခြင်းမရှိ ခဲ့ကြပါ၊ ယခု “နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလ”၏ ဝိညာဉ်ပျောက်ဆုံး ခြင်း၊ ပုံရိပ်သည်ကား အဘယ်သို့နည်း?
၅။ “ထောင်လွှားစော်ကားသောသူ” “အကာအရံသမားများ”ဟု အဓိပ္ပါယ် ရှိ၏။ လူသစ်များအသင်းတော်ကို လာကြသောအခါ၊ ခရစ်ယာန်ဟူ၍ ခေါ်သောသူတို့က ၎င်းတို့ကိုကာရံထားကြပြီး အသင်းတော်အပြင်ဘက် သို့နှင်ထုတ်ကြသည်။ ဤတန်ပြန် ခုခံကာကွယ်ရေး စနစ်သည် ဘုရားသခင်၏ လူတို့ကို မတရားစွပ်စွဲ ခုခံကြပါသည်။ လူမှုရေးစံ များကို ပယ်ချထားသူတို့၏ မျိုးဆက်သည် အမြဲတစေ လူသစ်များကို အသင်းတော်၌ ဝင်မလာရလေအောင် ကာရံထားပါသည်။ ဤသည် ထိုသူတို့၏ တူညီသော အကျင့်စရိုက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ “စတော့စ်အ ရောင်းအဝယ်ငှါနကြီး၌ အတူလုပ်ဆောင်ခြင်း” ကဲ့သို့ဖြစ်၏ ထိုသူတို့ သည် အသင်းတော်၌ ရောက်ရှိလာကြသောအခါ၌လည်း အခြားလူသစ်များ ဝင်မလာစေရန်၊ ကာရံထားကြပါသည်။
၆။ “မိဘစကားကို နားမထောင်သောသူ”လူတို့သည်မည်ကဲ့သို့ မိမိတို့၏ အသက်တာကို ဘုရားသခင်၌အပ်နှံထားကြပါသနည်း? မိဘစကား ကိုနားမထောင်သူတို့သည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို မလိုက်နာကြချေ! လောကီ၌ အသက်ရှင်နေထိုင်သလိုသာ အသက်ရှင်နေထိုင်ကြပါသည်။ လူမှုရေးစံများကို ပယ်ချထားသော မျိုးဆက်သစ်တို့နှင့် နောင်လာ နောက်သားတို့၏ ပုံရိပ်ကား အဘယ်သို့နည်း! ထိုသူတို့အကြောင်း ဤကျမ်းပိုဒ် ရေးသားထားပါသည်။ ထိုသူတို့သည် အသင်းတော်ကို ကွဲပြားစေသောသူ ဖြစ်သည်ကို သံသယရှိစရာမလိုပါ!
၇။ “ကျေးဇူးမရှိသောသူ” ဂရိဘာသာစကားအားဖြင့် ၎င်းစကားလုံးကို ရှင်လုကာ၆း၃၅၌တွေ့ရပါသည်။ “ကျေးဇူးမရှိသောသူ၊ ဆိုးသောသူ” ဟူ၍ခရစ်တော်မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ သနားကြင်နာတတ်ခြင်းကိုအစဉ် ပြသသော်လည်း သူတို့သည်၊ ကျေးဇူးကန်းကြသောသူတို့၊ ဖြစ်ကြပါ သည်! ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်၌ ကားများဖြင့် လာရောက်ကြပြီး အသင်းတော်၏ စောင့်ရှောက်ခြင်းကိုလည်း ခံရကြသည်၊ ထိုသူတို့ အား၊ မိမိတို့အိမ်သို့လည်း ခေါ်ဆောင်ကြပြီး ပြုစုစောင့်ရှောက်ကြ သာ်လည်း၊ ထိုသူတို့သည်ကျေးဇူးတင်စကား တစ်ခွန်းကိုတောင်မှ မပြောဘဲ ထွက်သွားကြသူများဖြစ်သည် သူသည် မွေးမိခင်ကိုပင် ကျေးဇူးတင်တတ်ခြင်းမရှိဘဲ! မွေးစားသားကဲ့သို့ ဆက်ဆံကြသည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင်၊ မိခင်ကလည်း မေတ္တာပျက်ပြယ်သဖြင့် တာဝန်အရ မုန့်ဖိုးငွေကိုပေးပြီး ကျောင်းသို့ လွှတ်လိုက်သည်။ ထိုသူသည် ဘုရားကျောင်းမှ ပြန်ထွက်လာသောအခါ၊ လက်ထက်ပွဲတုန်းက မင်္ဂလာပစ္စည်းကိုလည်း ခိုးယူခဲ့ပါသည်။ သူသည်မေမေ့ကို ငိုစေသူဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း စကားလုံး၊ တစ်လုံး တလေမှ ပြောကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သူအိမ်မှထွက်ခွါသွားသောအခါ ဘာဆိုဘာတခုကိုမှ ချဉ်ထားခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ “တကယ်ကျေးဇူးကန်း သောသူပင်ဖြစ်သည်” ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုကဲ့သို့ ကျေးဇူးကန်းသော လုပ်ရပ်မျိုးကို မကြာခဏတွေ့ရပါသည်။
၈။ “သန့်ရှင်းခြင်းမရှိသောသူ” ဆိုလိုသည်မှာ ညစ်ပေခြင်းဟုဆိုလိုပါသည်။ ထိုသူတို့သည် ဘုရားသခင်ကိုပုန်ကန်ငြင်းဆန်ကြသည် ထိုသို့ဆန့်ကျင့် လျက်ပင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်ယာဉ်များဖြစ်ကြသည်ဟု ဆိုကြ၏!ထိုသူ တို့သည် တန်ခိုးအာဏာစက်ရှိသမျှကို ဆန့်ကျင်ကြသူများ ဖြစ်ကြသည်။
၉။ “ပကတိကြင်နာစုံမက်ခြင်းနှင့်ကင်းသောသူ” ဆိုလိုသည်မှာ ထိုသူတို့၌ မေတ္တာအခံမရှိကြဟုဆိုလိုပါသည်။ ဇာတိသဘောဆန်ခြင်းဟု ဆိုလိုပါ သည်။ ထိုသို့သောသူတို့၏အကျိုးရလဒ်သည် ကလေးဖျက်ချခြင်း၊ကာမ ဂုဏ်ကျူးလွန်ခြင်းတို့ပင်ဖြစ်သည်၊ ထိုသူတို့သည် ကိုယ်သားသမီးတို့ကို သတ်ဖြတ်ကြပြီး၊ မိဘတို့သည် “အိမ်၌ကြောက်လန့်ဖွယ်နေထိုင်”ကြသည်၊ ထိုသူတို့ထံအလည်သွားရောက်သောအခါ ထိုသူတို့က ငါတို့သည်ခရစ် ယာဉ်များဟူ၍ပြောဆိုလေရှိပါသည်။ ဒေါက်တာလင်းဆေးလ်ပြောကြား သကဲ့သို့ “သနားခြင်း၊ ဂရုဏာမဲ့သူများ”ဟူ၍ ပြောခဲ့ပါသည်။ ကြောက် လန့်စရာပုံကားချပ်ပါတကား!
၁၀။ “ရန်ငြိုးဖွဲသောသူ” ထိုသူတို့သည် သင်းမြတ်အောင်နေထိုင်မတတ်သောသူ များပင်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့က သင့်အားရေရှည်ပေါင်းဖော်ဖို့ရန်ခွင့်ပြုကြ မည်မဟုတ်ပေ။ သင်သည်ထိုသူတို့ကို စိတ်ကျေနပ်အောင်ပေါင်းသင်းဖို့ ကြိုးစားပါသော်လည်း သူတို့ကကျေနပ်ကြမည်မဟုတ်ပေ၊ သူတို့နှင့်ငြိမ် ချမ်းအောင် သင်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
၁၁။ “ချောစားတတ်သောသူ” ထိုသူတို့သည် တပါးသူတို့ကိုပြောင်လှောင်၊ ကျီးစားပြီးkတိုက်ခိုက်ပြောဆိုကြသည် ယနေ့အချိန်အခါ အသင်းတော် သည် ပျောက်ချက်မလှကမ္ဘာပေါ်ဝယ်ပျောက်နေသည်! ပျောက်ဆုံးသော အသင်းတော်ဟူသည် တပါးသူတို့ကို အသင်းတော်မှ နောက်ပြန် လှည့်ရန်ဆွဲခေါ် သောသူဖြစ်ကြပါသည်။
၁၂။ “ကိုယ်ဣန္ဒြေကို မချုပ်တည်းနိုင်သောသူ” ဤသူသည် မိမိကိုကိုထိန်း ချုပ်မှုမလုံသောသူကို ဆိုလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဆိုးဝါးလာသော လူမှုအဖွဲ့ အစည်းကိုတွေ့မြင်ရကြသည်။ ထိုသူတို့သည် အသင်းတော်၌သက်ရောက် လာကြသော်လည်း၊ ကြာကြာမထိုင်နိုင်ကြပေ။ အကြောင်းမှာ မိမိကိုကို ထိန်းကွက်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသူတို့သည် ရိုင်းစိုင်း သောတောရိုင်းတရိစ္ဆာန်ပမာဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်မျှကြောက်စရာကောင်း သနည်း! ထိုသူတို့သည် အသင်းတော်တပါးပြီးအခြားသို့ သွားရောက်ခဲ့ ကြသူများဖြစ်သည်။ စပါဂျန်ပြောကြားခဲ့သကဲ့သို့ “သူတို့သည်ခိုနားစရာမ ရှိသော ငှက်များကဲ့သို့ ဖြစ်ကြ၏”ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၁၃။ “ပြင်းထန်သောသူ” ဆိုသည်မှာ “လက်စားချေသောသူ”ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ပင်ဖြစ်သည်။ (ဒေါက်တာမက္ကီး)။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့ရက်ကာလာ၌ နေ့ခင်းကြောင်တောင်၌ပင် လမ်းမပေါ်၌ သွားလာနိုင်ဖို့လုံခြုံမှုပင်မရှိတော့ပြီ။ အခြားသောအသင်းတော တို့၌ ခရစ်ယာန် လူသစ်များအဖို့ပင် လုံခြုံမှုမရှိတော့ပေ။ ယနေ့”ခရစ်ယာန်” ဟု ခေါ်ဝေါ်သောသူတို့ကပင် လက်စားချေတိုက်ခိုက်မှု ကမ္ဘာအဝန်း၌ ရှိနေပါသည်။ ဤသည် ခဲယဉ်းသော ခေတ်ကာလပင် ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ချိန်တုန်းက လူငယ်တစ်ယောက် သတ်မှတ်ချိန်၌ အပြင်မထွက်ရဟူသောအမိန့်ကြောင့် သူ၏မိခင်ကို သတ်ဖြတ်ရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ အမှန်တကယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအကြောင်းအရာကို ကြသပတေးနေ့ နံနက်ခင်းသတင်းစာ၌ ထိုအကြောင်းအရာကို ဖတ်ကြားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၄၀-၅၀ တုန်းက မလုပ်ခဲ့ဘူးသော အပြုအမူများ ယနေ့လူငယ်များ လုပ်ဆောင်နေကြသည်ကို အထင်းသား တွေ့ရသည်။
၁၄။ “သူတော်ကောင်းကို မုန်းသောသူ” စာပါအဓိပ္ပါယ်အရ “အမုန်းသမား” ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ရှိ၏။ သူတော်ကောင်းနှင့် အဆွေခင်ပွန်းဖွဲ့သောသူ”တို့နှင့် ဆန့်ကျင်သောသူတို့ဖြစ်ကြသည်။ သူတော်ကောင်းဟူသည် မုန်းတီးခြင်း ခံရသည်။ လူဆိုးတို့သည် “တည်ငြိမ်သောအချိန်အခါ၌” လူအချစ်ခံ ကြရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အသင်းတော်၌ လူကြီးများရွေးချယ် တင်မြောက်သောအခါ ထိုကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရပါသည်။ ဤလူမျိုးဆက်တို့၏ အကျင့်စရိုက်တို့ကို ဤကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့a တွ့ရပါ သည်။ ထိုသူတို့သည် သူတော်ကောင်းကို မုန်းသောသူဖြစ်ကြပါသည်။
၁၅။ “သစ္စာကိုဖျက်တတ်သောသူ” ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပါယ်သည် “သစ္စာဖေါက်သူ” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့ကို သင်ကိုးစားဖို့မသင့်ပေ။ သူတို့၏အကျင့်စရိုက်ကြောင့် သင့်အားလည်း အမြဲတစေ သစ္စာဖောက် လိမ့်မည်။ သူတို့သည် သဘောသဘာ၀အားဖြင့် “သစ္စာဖေါက်ကြ သူများ” ဖြစ်ကြပါသည်။
၁၆။ “သတိပေးခြင်းကို မခံသောသူ”ဟူ၍ ဆိုလိုသည်မှာ ပယမ်းပတာ ဖြစ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ “သနားခြင်းကရုဏာတော်နှင့် ခေါ်ဖိတ်သော အမှောင်မိုက်ထဲလည်း ခေါင်းမာပြီးဆက်လက်၍ အသက်ရှင်သူ၊ (ဒေါက်တာမာဗန့်အာရ်ဗြင်စင်တ့်) အတွေးအခေါ်မဲ့သော သူတို့ကို ဆိုလိုပါသည်။ အသင်းတော်၌ပါဝင်လာခြင်းမရှိဘဲ အသင်းတော်မှ ထွက်ခွါကြသူများဖြစ်ကြ၏။ စည်းမရှိကမ်းမရှိ၊ ပယမ်းပတာရှိနေသူကို သင်မကိုးစားသင့် သူတို့သည် “ခေါင်းမာသောသူနှင့်ပယမ်းပတာ” ဖြစ်နေသောသူများ ဖြစ်ကြသည်။
၁၇။ “မာန်မာနနှင့်ယစ်မူးသောသူ” ဆိုလိုသည်မှာ မိုက်ကန်းထောင်လွှားခြင်း ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ ၁တိ ၆း၄ ၌ ဖေါ်ပြသည့်အတိုင်းဂရိဘာသာ စကားအားဖြင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ “မာနနှင့်ယစ်မူး၍ အလျင်း နားမလည်ဘဲ ပုစ္ဆာအမေးကို ဆွေးနွေး၍ စကားကြောင့်သာ ငြင်းခုံသောအားဖြင့် စိတ်ပေါ့သောသူဖြစ်၏။ ထိုသို့ပြုလျှင် ငြူစူခြင်း၊ ရန်တွေ့ခြင်း၊ သူ့အသေရေကိုရှုတ်ချခြင်း၊ မနာလိုသောကြံစည်ခြင်း”ဟူ၍ ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ၈၉%ရာခိုင်နှုန်းလောက်သော အသင်းအုပ်ဆရာတို့ ကို ထိုသို့သောသူတို့အကြောင်း မေးမြန်းကြည့်သော် “ထိုခရစ်ယာဉ်ဟု ခေါ်သောသူတို့သည် အသင်းတော်ကို ထက်ခြမ်းကွဲစေသောသူဖြစ် သည်။ (၁၀)ယောက်အနက် (၉)ယောက်သော သင်းအုပ်ဆရာတို့၌ ထိုကဲ့သို့သော လူတို့ကြောင့် အသင်းတော် ကွဲပြားကြရသည်။ ထိုသူတို့သည် မာန်မာနနှင့် ယစ်မူးသောသူများဖြစ်ကြပါသည်။ (Dr. Vincent) .
၁၈။ “ဘုရားသခင်ကို နှစ်သက်သည်ထက် ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းကို သာ၍နှစ်သောသူ” အဓိပ္ပါယ်သည် ဘုရားသခင်ထက် ကာမဂုဏ် ခံစားခြင်းကို ပို၍ခံစားလိုသည်။ (ဒေါက်တာ (Dr. Vincent). ဒေါက်တာမက္ကီးပြောကြားခဲ့သည်မှာ “ကာမဂုဏ်ခံစားဖို့ရန် ငွေကြေး သုန်းဖြုန်းသောအခါ အစီအစဉ်တကျသုံးဖြုန်းမည်ဟူ၍ ဘယ်တော့မှ မရှိခဲ့ဘူးလေ။ လူသည်ဘုရားသခင်ကိုချစ်ဖို့ထက် ငွေကြေးကိုပို၍ ချစ်သောကြောင့် ဒေါ်လာဘီလျှံနှင့်ချီ၍ ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်အတွက် သုန်းဖြုန်းခဲ့ကြသည်။ (ibid., p. 147) ထိုကဲ့သို့ လူငယ်တို့သည်လည်း ကွန်ပျူတာတွင် ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားကြပြီး သမ္မာကျမ်းစာဖတ်ကြားဖို့ပင် ကျွန်ုပ်တို့၌ အချိန်မရှိဟူ၍ ပြောကြားကြသည်။ ထိုသူတို့သည် စစ်မှန်သောအသက်တာ၌ မပြောင်းလဲကြသောသူများဖြစ်ကြသည် ဟုဆိုခြင်းကို အံ့ဩစရာပင်မလိုပါ။ ထိုသူတို့သည် ဘုရားသခင်ထက်ပို၍ ငွေကြေးကို တက်မက်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
၁၉။ “ဘုရားဝတ်၌ မွေ့လျှော်ယောင်ဆောင်၍၊ မွေ့လျော်ခြင်းတန်ခိုးကို ငြင်းပယ်သောသူ” ထိုသို့သောသူတို့သည် အပြင်သဏ္ဍာန်ကိုသာ တန်ဖိုးထားပြီး စစ်မှန်၍အဟုတ်တကယ်ရှိနေသောတရားကို တန်ဖိုးမထားကြပေ။ (Dr. Vincent). ထိုသို့သောသူတို့သည် ဘာသာရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်ကြပြီး စစ်မှန်သော ဘ၀မူကား လစ်ဟာလျှက်ရှိပါသည်။ (Dr. McGee) . ခရစ်တော် ယေရှုကို သိခြင်းမရှိပဲ အသင်းတော်သို့ သွားရောက်ခဲ့ကြခြင်းသည် “အစဉ်သင်သော်လည်း သမ္မာတရားကို လေ့ကျက်ခြင်းသို့အလျင်းမ ရောက် (၂တိ ၃း၇) ဟူသောကျမ်း၌ ပြောထားသကဲ့သို့ ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် ထိုသူတို့ထံ ဧဝံဂေလိတရားကို မျက်နှာပြာသည်အထိ ဝေငှတိုက်တွန်းသော်လည်း ထိုသူတို့သည် “ဘုရားဝတ်၌မွှေ့လျော် ယောင်ဆောင်၍” “မွေ့လျော်ခြင်းတန်ခိုးကို ငြင်းပယ်သောသူ” ဖြစ်မြဲ၊ ဖြစ်နေမည်သာဖြစ်သည်။ ဝမ်းနည်းဖွယ် ကျွန်ုပ်တို့ အသင်းတော်၌ အပတ်တိုင်းတနင်္ဂနွေနေ့ ဝတ်ပြုအစီအစဉ်၌လည်း ထိုကဲ့သို့သော လူအများရောက်ရှိနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
“လူမှုရေးစံကို ပယ်ချသောသူတို့၏မျိုးဆက်”တို့သည် ယခုဆိုလျှင် (၄၅)နှစ်မှ (၆၅)နှစ်အထိ ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ထိုသူတို့၏ သားစဉ်မြေးဆက်တို့သည် အရေးပါအရာရောက်သောသူ မရှိခဲ့ပေ။ ဒေါက်တာလင်းဆေးလ်က ထိုသူတို့နှင် ပါတ်သက်၍ ဖေါ်ပြထားသည်မှာ သူတို့သည် “တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သမား၊ အရှက်အကြောက်ခံကြရသူ၊ သနားခြင်းကရုဏာမဲ့သူများ၊ ဘာသာရေးအယူလွှဲမှားသူ၊ မျိုးကန်းပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အကျင့်စာရိတ္တကင်းမဲ့သောသူများဖြစ်ကြ၍ “ထိုသူတို့ကို ၂တိ (၇း၁-၈)၌ ဖေါ်ပြထားပါသည်။” ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အခုဆိုလျှင် ထိုသို့သောပုဂ္ဂိုလ် (၁၉)ဦးနှင့်ပါတ်သက်၍ သင်သိသည့်အတိုင်း သိပြီဖြစ်၍ မိတ်ဆွေကော ဘာတွေမှားနေပါသလဲ။ “လူတို့သည်” ဟူသောစကားလုံးကို မှတ်သားကြည့်ပါ။ ထိုစကားလုံးသည် ၎င်းကျမ်းပိုဒ်၌ သုံးကြိမ်တိုင်တိုင်တွေ့ရပါသည်။ အပိုဒ်ငယ်(၂)၌” လူတို့သည် ကိုယ်ကိုကိုယ်ချစ်သောသူ၊ အပိုဒ်ငယ်၈တွင်မူကား၊ “ ထိုသူတို့သည သမ္မာတရားကို ဆီးတားကြ၏။ စိတ်နှလုံးယိုယွင်း၍ ယုံကြည်ယောင် ဆောင်သောသူဟူ၍၎င်း၊ အပိုဒ်ငယ် ၁၃ ၌ကား “ဆိုးညစ်သောသူ၊ လှည့်ဖြားသောသူ၊ ဆိုညစ်ခြင်း၌ တဖြည်းဖြည်းတရွေ့ရွေ့တိုးပွားကြသောသူများ” စသည်ဖြင့် တွေ့ရပါ သည်။ ဤဖေါ်ပြချက်အားလုံးတို့သည် အသင်းတော်၌ ပျောက်ဆုံးနေကြသော ယောက်ျm;မိန်းမတို့အားလုံးကို ကိုယ်စားပြုရည်ညွှန်းဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၁။ ဘုရားသခင်ကို နှစ်သက်သည်ထက် မိမိကိုယ်ကိုချစ်သောသူ
၂။ သမ္မာတရားကို ဆီးတားသောသူ
၃။ ဆိုးညစ်ခြင်း၌ တရွေ့ရွေ့တိုးပွားကြသောသူများဖြစ်ကြသည်။
“ဆိုးညစ်သောသူ၊ လှည့်ဖြားသောသူတို့မူကား သူတပါးကို၎င်း၊ ကိုယ်ကို၎င်း လှည့်ဖြား၍ ဆိုးညစ်ခြင်း၌ တရွေ့ရွေ့တိုးပွားကြလိမ့်မည်။ (၂တိ ၃း၁၃)။
လူတို့သည် ထိုအဆင့်၌ ရောက်ရှိကြသောအခါ အသက်တာ ပြောင်းလဲဖို့ ခဲယဉ်းသည်ကို တွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်သည် ထိုသူတို့အား လက်လွှတ်အရှုံးပေးသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍သင့်အားလည်း ဘုရားသခင် လက်လွှတ်အရှုံးပေးမည် ဆိုလျှင် သင့်အဖို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ အထူးပင်နှောင်းနှေးသွားမည် ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် သင်ခံစားချက်အတိုင်း အသက်မရှင်စေလိုပါ။ သင်သည် အပတ်စဉ် ဘုရားကျောင်းသို့ လာသော်လည်း သင့်ကို ဘုရာသခင်လက်လွှတ်အရှုံးပေးသူ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ပျက်အတွေ့အကြုံ ကျွန်ုပ်တွေ့ကြုံခဲ့ပါသည်။ မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ သင့်အပြစ်က သင့်အား အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်ဟူ၍ ခါးသီးစွာ ခံစားပါက သင့်အဖို့မျှော်လင့်စရာ ရှိနေသေးသည်။
ခရစ်တော်ဘုရားကို သင်ရှာဖွေနေရင်း နေ့ရက်ကာလတွေကုန်လွန်ပြီး သင်ကိုယ်တိုင် ပျောက်ဆုံးနေခြင်းလား၊ သင်ကိုသင်တရွေ့ရွေ့နှင့် အပါယ်ငရဲထဲ ဆင်းသက်နေသည်ကို သင်ကိုသင်မည်သို့ သိနိုင်မှာလဲ၊ သင်မည်ကဲ့သို့ ၎င်းမီးငရဲထဲ တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ အသက်ရှင်နေနိုင်မည်နည်း။ ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ကား “ကျဉ်းမြောင်း တံခါး၀ကို ဝင်ခြင်းငှါကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့”။ (လုကာ ၁၃း၂၄)။
၁၉၇၂ ခုနှစ်သို့မဟုတ် ၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ ကျွန်တော် ဆန်ဂျော့စ်မှ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုသို့ ကားမောင်းနှင်သည်ကို အမှတ်ရမိသည်။ လူငယ်လူရမ်းကားတစ်ယောက် ကျွန်ုပ်အတူ ကားစီး၍ လိုက်လာပါသည်။ ထိုလူငယ်က ဟိုဟိုဒီဒီ အကြောင်းစုံကို လမ်းတစ် လျှောက်လုံး ပြောပြခဲ့သည်။ သူသည် အရက်မူးမပြေသေးသည်ဖြစ်၍ အရာရာသည် သူ့အတွက် မှုန်ဝါးဝါးဖြစ်နေခဲ့၏။ မူးနေသဖြင့်မရပ်နားနိုင်အောင် စကားပြော၍ ကျွန်ုပ်ပင် မဖြေကြားချင်လောက်အောင်ဖြစ်နေသည်။ ကျွန်ုပ်စဉ်းစားနေသည်မှာ “ဒီလူငယ်အတွက် မျှော်လင့်စရာမရှိပါလား” ဟူသည်ကို ကျွန်ုပ်ရိပ်မိလာပါသည်။ ထိုသို့ ကျွန်ုပ်၏အတွေးသည် မှားယွင်းနေပါသည်။ နောက်မကြာမီ သူသည် အသစ်တဖန် အသက်တာပြောင်းလဲနေပြီဖြစ်သည်။ ယနေ့တွင် ထိုလူငယ်သည် အရီစိုးနားပြည်နယ်၌ ဖိုးနစ်၌ သင်းအုပ်ဆရာတပါးဖြစ်နေပြီး အိမ်ထောင်ပင်ပြုနေပြီဖြစ်သည်! ထိုသူသည် “ကျေးဇူးမေတ္တာအံ့ဖွယ်ချိုသာ၊ ပြစ်သားငါ့ကိုကယ်ရှာ”ဟူသော ဓမ္မသီချင်းဆိုနိုင်ပေပြီ! သင်သည်လည်း ပျောက်ဆုံးနေသူဖြစ်ပါက သင့်အဖို့မျှော်လင့်စရာရှိနေပါသည်!
သင့်အဖို့တခုတည်းသော မျှော်လင့်ရာသည်-ယေရှု၏နာမတော်ပင်ဖြစ်ပါသည်! ယေရှု ဘုရားကိုယုံကြည်ပြီး ကယ်တင်ခြင်းရယူပါ!
(၁၈၁၉-၁၉၀၄ခုနှစ်၊ ဝီလျံ.တီစလစ်ပါ သီကုံးရေးသားသော
အကယ်၍ အသစ်သောအသစ်တာ၌ မပြောင်းလဲသေးပါက၊ အနောက်ဖက်အခန်းထဲဝင် သွားပါ၊ ဒေါက်တာကေကန်က တိတ်ဆိတ်စွာဆုတောင်းပေးပါလိမ့်မည်။
အသစ်သောအသက်တာ၌ ပြောင်းလဲပြီးဖြစ်သော သင်တို့အတွက်အနည်းငယ်ပြော လိုပါသေးတယ်၊ ၂တိ၃း၁-၈ ဤကျမ်းပိုဒ်သည် ငရဲသားအမိုက်၊ စိတ်ပျက်စရာကျမ်းပိုဒ် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင် ဇာတိပကတိလူတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် စိတ်ပျက်စရာဖြစ်စေ ပါသည်။ ဤကျမ်းထဲကကြီးမားသော စိတ်သက်သာရာအချက်၊ ယနေ့ ကျွန်ုပ်အတွက်ရှိ နေဆဲပင်ဖြစ်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၌ ဖေါ်ပြသော လူမျိုးတို့၏အခြေအနေအကြောင်းကို ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားခြင်းကို ဖတ်ရခြင်းဖြစ်သဖြင့် ကျွန်ုပ်အတွက်ခွန်အားဖြစ်စေခဲ့ပါ သည်။ ၎င်းက ကျွန်ုပ်အား “သမ္မာကျမ်းစာ၌ ဖေါ်ပြသမျှသည် ပြည့်စုံလာပါသည်”ဆို ခြင်းအားအမှတ်ရစေပါသည်။ ဆိုးသောအရာများကို ကြိုသိရသဖြင့် ကျွန်ုပ်အားအထိန်း အချုပ်မဖြစ်စေခဲ့ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာက ကြို၍ပြောကြားသည်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့အားပေးအပ်ခဲ့ သောနုတ်ကပတ်တရားတော်သည် ကောင်းကင်ပလ္လင်ထက်၌ ယနေ့ပင်ရှိနေပါသည်။ ဟူ၍၎င်း”ဖြစ်ပါသည်! ၂တိထဲကအခြားသော အခန်းကြီးများ၌ မိန့်ကြားခဲ့သည်မှာ “ကိုယ်တော်တိုင်ပေါ်ထွန်း၍ နိုင်ငံတော်ထင်ရှားသောခေတ်ကာလ၊ အသက်ရှင်သောသူ၊ သေသောသူတို့ကို စစ်ကြောစီရင်တော်မူသော”(၂တိ၄း၁)၌ မိန့်တော်မူပါသည်။ မည်သို့ ပင်ဆိုးသောသူတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အားနှောင်ယှက်သော်လည်း၊ ယေရှုသည် တဖန်ကြွလာ ပါတော့မည်! အောက်ပါဓမ္မသီချင်း စာသားကိုနားထောင်ကြည့်ပါ-
ယေရှုသည် တဖန်ကြွလာ၊ တဖန်ကြွလာ
ခရစ်တော်ဘုရား၏ ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းကြောင့် ဝမ်းမြောက်ခြင်းကို ခံစားရ သောခရစ်ယာဉ်တဦးအဖို့ ဝမ်းမြောက်ခြင်းအခြားမရှိနိုင်ပေ။ ထိုသို့ကျွန်ုပ်အမြဲခံစားခဲ့ဖူးပါ သည်! ဒေါက်တာချားလ်.အယ်လ်.ဖိန်းဘတ်ထုတ်ဝေသော ပရောဖက်ပြုစာအုပ်ကို လေ့ လာပြီးမှ ဤဒေသနာတော်ကို ပြုစုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုစာအုပ်ကို ဘယ်ကရရှိသည်ကို မေ့နေပြီဖြစ်သည်၊ သို့သော်၊ ၁၉၇၁ခုနှစ်တုန်းက၊ တရုတ်လူငယ်တစ်ယောက်ပေးသွား သောအရှေ့ဘက် စာရွက်ခြမ်းတခုကို ကျွန်ုပ်ဖတ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သူ၏နာမည်မှာ ကင်ယီးဖြစ်ပြီး၊ သူသည်သင်းအုပ်ဆရာတစ်ပါးဖြစ်ပါသည်။ သူ့ကိုကျွန်ုပ်သိရခြင်းမှာ၊ ကိုးလ်ဒင်းကိတ်နှစ်ခြင်းသီအေ်လိုဂျီစီမန်နရီ၌ ပထမနှစ်ပညာသင်နှစ်တွင်၊ စက်ကရာမင် တို၌ရှိ တရုတ်သာသနာပြုကျောင်း၌ ကျောင်းပိတ်ချိန်တွင် သွားရောက်ခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ကင်ကအောက်ပါအတိုင်းရေးသားခဲ့ပါသည်။
“ချစ်ရသောဘတ်၊ သင့်၏မေတ္တာရင်းခံ စိတ်စေတနာဖြင့် အသင်းတော်ကို ချစ်သောကြောင့်၎င်း(ပထမနှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်) သာသနာကိုချစ်သောကြောင့်၎င်း(လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့အသင်းတော်) သင့်၏အနာဂတ်အိပ်မက်ကြောင့် မလျော့သောဇွဲလုံ့လဝိရိယဖြင့် သတင်း ကောင်းဝေငှာပေးခြင်းကြောင်း၎င်း၊ အခြားသောသူတို့ကြောင့်မဟုတ်၊ သင့်၏စစ်မှန်၍တပါးသူတို့ကို စိတ်စေတနာဖြင့် ဝေငှာခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်၏ ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးခံစားရ၏! မေညေအေ့a-သခင်သည်တဖန် ကြွလာပြီ! ခရစ်တော်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်၌၊ ကင်”
အာမင်!အာမင်! ကင်ကဲ့သို့ ပုဂ္ဂိုလ်ထူးတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏သာသနာကို အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် အရာရာ၌ အောင်မြင်သောသူဖြစ်စေခဲ့သည်! လူတဦးက၊ အခြားသောသူတို့ကို ခွန်အားပေးသော်လည်း မအောင်မြင်သဖြင့် အရမ်းစိတ် ဓါတ်ကျရတယ်ကွာဟု ပြောကြားခဲ့ဖူးပါသည်။ “ဟုတ်ပါမည်၊ သို့သော်အားမလျော့နှင့် တဦးတယောက်တော့အောင်မြင်မှာပါ၊ ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့် သင်ဝမ်းမြောက်ရပါလိမ့်မည်” ဟူ၍ ခွန်အားပေးခဲ့သည်! ထိုသို့ယေရှုသခင်ထံ သင်ပို့ဆောင်သောကြောင့် ယေရှုကြွလာ သောအခါ၊ သင့်အားဝမ်းမြောက်ပါလိမ့်မည်! ခရစ်တော်အားကူညီ၍ အမှုတော်ထမ်း ဆောင်သမျှသောသူတို့အဖို့၊ တဖန်ကြွလာသောအခါ၊ သခင်သည် သင့်အဖိုးဝမ်းမြောက် ပါလိမ့်မည်! အာမင်! Mမေညေအေ့a- ယေရှုသည်ကြွလာပြီ!
မျက်နှာတောက်ပလျက် သခင်အား စောင့်ဆိုင်းသူများမြင်ခွင့်ရ
ထိုစဉ်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ကိုဖူးမြင်အစဉ်
ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ကိုဖူးစဉ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ကိုဖူးအစဉ်
ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ကိုဖူးအစဉ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ကိုဖူးအစဉ်
(၁၉၃၄-၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဒိုတီရမ်ကို သီကုံးရေးသားသော
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာဂရိတန်အယ်လ်.ချန်မှ ၂တိ၃း၁-၈ကို ဖတ်ကြားပေးပါသည်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ် ဂရိဖက်စ်မှ ၁၈၇၈ အိပ်ခ်ျ.အယ်လ်